Previous Article ASCSDA: Ndiowu Enwetala Ego Ịmalite Ọrụ Ụlọ Obibi Ndị Ji Otu Ahọ Efe Ala Nna Anyị
Next Article ASCSDA Ekwe Nkwà Ikesàkwùrù Ọtụtụ Ime Obodo Ego Ọrụ n'Izuụka Ọzọ
Ọ bụ nwunye aka na-achị steeti Anambra, bụ Oriakụ Ebelechukwu Obianọ nyere ndụmọdụ a ma kpọọ oku a, oge ọ gara njem nleta n'okpuru ọchịchị Oyi na Dunukọfịa. Ọ kọwara mkpa ọ dị mmadụ inyerịtara onye ọ kà mma aka, n'ihi na ọ bụghị naanị na ọ ga-enye aka itute olileanya ndị ahụ bụ ndị olileanya ha fùrù èfù, kama na ngọzị di ukwuu na-esokwa onye na-eme ihe dị otu ahụ, ọ kachasị onye na-eme ya n'elekwàsịghị anya n'ihe ọ ga-erita ma ọ bụ nweta site na ya.
Ya bụ agụ nwaanyị bụkwa onye chọpụtara na onyeisi òtù ọrụ obi ebere 'Caring Family Enhancement Initiative' (CAFE) gara n'ihu mee ka a mara na ọchịchị nọ ugbua na steeti ahụ ghọtara ihe ọtụtụ ndị mmadụ na-agabiga n'ebe dị iche-iche, bụzị nke mere o jiri wàta ọgọdọ inye ụmụafọ steeti ahụ ezi ọchịchị, dịka ọ dị ugbua na steeti ahụ.
N'okwu nke ya na mmemme ahụ, onyeisi mahadum Chukwuemeka Ọdụmegwu Ojukwu, bụ Ọkammụta Greg Nwakọby kọwara Oriakụ Obianọ dịka ezi onye otu Christ ọnọdụ ụmụ mmadụ na-emetụ n'obi, nakwa onye nwere obi umeala kwesiri ka e ñomie ya, n'ilekwasị anya n'ọtụtụ ọrụ ọma dị iche-iche ọ rụpụtagòrò na ihe o megooro ụmụ mmadụ site n'òtù CAFE, ma dụọ ya ka o jide ka o ji.
Na ntụnye nke ha n'otu n'otu, onyeisi oche nchere ogè n'okpuru ọchịchị Oyi, bụ Maazị Nnamdi Nwadogbu, na ògbò ya nke Dunukọfịa, bụ Maazị Emeka Okonkwọ tòrò oriakụ Obianọ maka igosipụta obi ezi nne n'ebe ndị ụwa na-atụ n'ọnụ nọ, site n'ihicha ọtụtụ ndị mmadụ anya mmiri na ime ka olileanya ọtụtụ dịkwa ndụ ọzọ taa, bụ nke o nwebeghị nwunye gọvanọ steeti ahụ megoro ihe dị òtù ahụ n'oge mbụ, ma mekwazie ka ọ mara na ihe ndị ahụ niile ga-aga n'ihu ikwuru ya ma dịkwa ọkpụtọrọkpụ n'aha ya, ọbụnadị oge agba ọchịchị ha bịara n'is njedobe.
Na mbụ na ntụnye ya, onye na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo Oyi n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti ahụ, bụ Maazị Charles Obimma, bụkwa onye nyere òtù CAFE igwè ise e ji akwa ákwà dịka onyinye nkwàdo mere ka a mara na ihe Oriakụ Obianọ megooro ndị ụwa na-atụ n'ọnụ na steeti ahụ enyela nnọọ aka n'ịkwàdò ezi ọrụ na-ezi mbọ nke ọchịchị Obianọ na-agba ịkwalite ezi ọnọdụ obibi ndụ bụ ịgba nye ụmụafọ steeti ahụ.
A nọrọ na mmemme ahụ wee nye ọtụtụ ihe onyinye dị iche-iche, nke gụnyere akpa osikapa, ego, ihe e ji akwalite mmụta, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ nyegara ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, ndị agadi, ndị di ha nwụrụ na ụmụaka.